သင်၏ RSS Feed ကိုသေခြင်းမှထမြောက်ရန်အချိန်ရောက်ပြီ Martech Zone
သင်၏ RSS Feed ကိုသေခြင်းမှထမြောက်ရန်အချိန်ရောက်ပြီ
ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 12, 2020 ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 12, 2020 Douglas Karr
လူကြိုက်များယုံကြည်ချက်ဆန့်ကျင်, feeds တွေကို အင်တာနက်မျက်နှာကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုနေဆဲ (သို့) အနည်းဆုံးကမ္ဘာလောကသို့ရောက်နေဆဲဖြစ်သည်။ Content Syndication သည် application နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ feed စာဖတ်သူကိုအသုံးပြုသူများထက် ပို၍ သုံးစွဲနိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ကောင်းမွန်စွာကြည့်နိုင်ခြင်းသည်အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာများအတွက်ကောင်းကျိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။
မှတ်စု: သင်ဆုံးရှုံးသွားလျှင် - ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါ RSS feed ဆိုတာဘာလဲ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ Feedburner အကောင့်အဟောင်းကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူ ၉၀၀၀ ကျော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ် feed ဖြင့်ကြည့်ရှုနေဆဲဖြစ်သည်ကိုတွေ့သောအခါကျွန်ုပ်အလွန်အံ့အားသင့်သွားသည်။ wow! ငါသည်အခြားဆိုဒ်များကိုစကြည့်ရှုသောအခါ, သူတို့ဘလော့ဂ်အချို့အပေါ် 9,000+ စာဖတ်သူများရှိခဲ့ပါတယ်။ WordPress ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ RSS feed ကိုသေခြင်းမှထမြောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ပြီးသောအရာအနည်းငယ်ရှိပါသည်။
သင်ရှိသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ post thumbnail enabled သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတင်ပြီးသင့်ဆောင်းပါးတွေမှာအထူးပုံရိပ်ရှိစေရန်လိုအပ်တဲ့ tagging ကိုထည့်ပါ။ WordPress ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကိုလုပ်နိုင်သည် SB RSS Feed Plus ပလပ်အင် WordPress အတွက်သို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုရေးနိုင်သည်။
implement Feedpress ပါ သင်၏ feed စားသုံးမှုနှင့် click-through rate ကိုတိုင်းတာ။ တိုင်းတာနိုင်ပြီးသင်၏ URL URL ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ သင်၏ feed ကိုသင်၏လူမှုရေးလမ်းကြောင်းများသို့တွန်းပို့နိုင်သည်။
မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာပြurbနာကိုထည့်ပါသို့မဟုတ်သင်၏အစာကျွေးမှု၏အခြေခံတွင်လုပ်ဆောင်ရန်ခေါ်ဆိုပါ WordPress SEO plugin ကို။ လူတွေဟာငါတို့ရဲ့ feed ကိုတစ်ချိန်လုံးခိုးယူပြီးပြန်လည်ထုတ်ဝေတဲ့လူတွေကိုဖမ်းမိပြီးသူတို့ထုတ်ဝေတဲ့အချိန်မှာသူတို့မူပိုင်ခွင့်ကိုသိမ်းထားနိုင်လောက်တယ်။
သင်၏ထည့်သွင်းမှုလိပ်စာကိုသင်၏မီနူးထဲသို့ထည့်ပြီး RSS feeds အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသင်္ကေတကို သုံး၍ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်သို့တင်ပါ။
လိုအပ်သည့် header tag များကိုခေါင်းစီး tag များအကြားထည့်သွင်းရန် application များနှင့် browser များအနေဖြင့်သင်၏ feed လိပ်စာကိုရှာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ feed address အတွက်ကုဒ်ကိုဒီမှာထည့်ပါ။
Feedburner ကိုသတ်ပြီး FeedPress ကိုအသက်ဝင်စေပါ။
ကျနော်တို့ Feedburner ကိုချပြီးအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တယ် Feedpress ပါ ငါတို့ site ပေါ်တွင်။ ၎င်းသည်သင်၏အစာကျွေးမှုကို CNAME စွမ်းရည်ကဲ့သို့သောထူးခြားသောအပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည့်အပြည့်အဝထည့်သွင်းထားသည့် Feed Analytics ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာပါ URL ။ ဒီတော့ငါ subdomain ရှိတယ် https://feed.martech.zone ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာကျွေးခြင်းအဘို့အသတ်မှတ်!
သင့် site ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲဒီမှာ Feedpress ပါ:
FeedPress ကိုသင့်ရဲ့ feed ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။
လူမှုမီဒီယာထုတ်ဝေ - FeedPress မှာလည်းမယုံနိုင်စရာကောင်းတယ် လူမှုမီဒီယာပေါင်းစည်းမှု သင်၏ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များအားလုံးတွင်အသစ်ထုတ်ထားသောအကြောင်းအရာအားလုံးကိုအလိုအလျောက်ထုတ်ဝေနိုင်သောနေရာ။
အစာခြေရာခံခြင်း - သင်စာရင်းပေးသွင်းသူမည်မျှရှိသည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်၊ ဤစာရင်းပေးသွင်းထားသူများကသင်၏အစာကိုမည်သို့စားသုံးနေသည်ဟူသောအဆင့်မြင့်ပြီးတိကျသောအစီရင်ခံခြင်း။
အီးမေးလ်သတင်းလွှာ - 1000 ရယူသူသို့မဟုတ်ပိုနည်းသောအခမဲ့။ သူတို့ရဲ့သတင်းလွှာရဲ့အင်္ဂါရပ်ကိုဖွင့်ပြီးသင့်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာထည့်သွင်းဖို့သူတို့ရဲ့ signup form ကုဒ်ကိုရယူပါ။
အသိပေးချက်များ Push - PubSubHubbub မှတဆင့်တက်ကြွသောသတိပေးချက်များကိုသင်၏အသစ်သောအကြောင်းအရာကိုထည့်သွင်းပါ။
အကြောင်းအရာစိတ်တိုင်းကျ - ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနှင့်လိုဂိုတစ်ခုထည့်ပါ၊ သင့်အကြောင်းအရာကိုဖြတ်ပါ၊ ပိုမိုဖတ်ရန်စာသားကိုပြုပြင်ပါ၊ စာမူအရေအတွက်ကိုချိန်ပါ။
လုံခြုံသောလက်မှတ် - ပေးပို့ခြင်းကိုတိုးမြှင့်စေရန် SSL ကိုပြဌာန်းခြင်း။
Google Analytics ပေါင်းစည်းမှု - အလိုအလျောက် UTM ခြေရာခံခြင်းကို feed စာဖတ်သူများကသင်၏ site သို့နှိပ်လိုက်သောအခါ။
အခြားပုံစံများ - သင်၏ feed ကို XML၊ JSON သို့မဟုတ် HTML တွင်သုံးနိုင်သည်။
WordPress ကို Plugin ကို - WordPress တွင်သင်ပါဝင်လျှင်၎င်းတို့သည်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် plugin တစ်ခုကိုပေးသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ငါအတွက်တွဲဖက် URL ထည့်ပြီးပါပြီ Feedpress ပါ - နှင့်လိုလားသူပလက်ဖောင်းအကြံပြု!
Tags: နောက်တစ်မျိုးလျှောက်လွှာ rss xmlfeedburner ကနေ feedpress မှပြောင်းလဲအစာfeed အိုင်ကွန်မင်္ဂလာပါကျွေးသည်နင်feed အတွက် header ကို tagသင့်ရဲ့ feed တွင်မူပိုင်ခွင့်ထည့်သွင်းနည်းလူမှုရေးမှထုတ်ဝေဖို့ဘယ်လိုjson feedrss feed ကိုrss အိုင်ကွန်လူမှုရေးမှ rssRSS xmlsb rss feed ကိုပေါင်း plugin ကိုWordPresswordpress plugin ကို
AeroLeads: ဤ Chrome Plugin ဖြင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ Prospect ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ